Nzira yekudzivirira mafaira muLinux | Linux Vakapindwa muropa
Maitiro ekudzivirira mafaera muLinux
Mune michina yemakomputa zvinokwanisika kuunganidza a Ruzivo rwakawanda iyo inogona kuita seshongwe yechokwadi yeBhabheri uye semhedzisiro, kuzadzikiswa kwehurongwa kunogona kuve kwakakosha. Asi zvakanyanya kukosha ndedzimwe dhata redu, iro rinogona kuve rakakosha kwezuva redu zuva nezuva uye kurasikirwa naro kana kuve neanowana mukana kwaisazove ndiro yekuravira kwakanaka zvachose.
Kuchengetedzwa kwekombuta kunokosha
Kune aya kesi isu tine chattr kuraira, izvo zvichatibvumidza isu kuchengetedza mafaira akakosha kwatiri.
Iyo chattr yekuraira inowanzo shandiswa ku gadzirisa hunhu hweiyo ext2 uye ext3 mafaira masystems. Iwe unogona kutaura kuti uyu murairo wakaenzana kune chmod yekuraira, asi neakasiyana syntax uye sarudzo. Kana ikashandiswa nemazvo, tinogona kuita kuti zviome kune anopinda uyo akawana mikana yakakwana pasystem yedu yekudyidzana nemafaira edu.
Iwo wekuraira uri nyore kushandisa, uye nawo tinokwanisa kuchinja zvimiro zvemafaira edu kana maforodha nenzira yakapusa. Semuenzaniso, kana tichida kuti iyo faira haigone kudzimwa, kana kutumidzwazve zita, izvo zvinongedzo zvekufananidza hazvigone kuratidzwa, kana data kunyorwa kune iyo faira, isu tinoshandisa inotevera syntax:
# chattr + i filename kana nzira
Kuti ushande nemafaira zvakafanana, mutsauko chete ndewokuti kana tichida kushandura hunhu mumafaira zvichingodzokororwa (mafaera ane iro folda) isu tinoshandisa iyo -r hunhu.
# chattr -r + i dhairekodhi zita kana nzira
Asi isu tine zvimwe zvakawanda sarudzo dziripo, dzatinogona kuziva sekugara kuri mubhuku. murume chattr
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Resources » Maitiro ekudzivirira mafaera muLinux